ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Sally ကြောင့် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းပြည်နယ် တချို့ ရေကြီး ရေလျှံမှု အန္တရာယ်များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရ - Pyit Time Htaung
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Sally ကြောင့် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းပြည်နယ် တချို့ ရေကြီး ရေလျှံမှု အန္တရာယ်များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရ
တနာရီကို ၁၆၅ – ကီလိုမီတာနှုန်းလေတိုက်ပြီး မိုးပါသယ်လာ တဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Sally ကြောင့် မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့က အမေရိကန်ကမ်းရိုး တန်း ဒေသတွေမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မိုးသည်းသည်း ထန်ထန် ရွာသွန်းခဲ့ပြီး အယ်ဘားမား (Alabama) နဲ့ ဖရော်ရီဒါ (Florida) ပြည်နယ် ဒေသတချို့ မှာ မကြုံစဖူး စံချိန်တင် ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်မယ့် အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နေ ရ ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့နေ တဲ့ ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်း အဆင့် ၂ ရှိတဲ့ Sally မုန်တိုင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်း မှာ Alabama ကမ်းရိုးတန်း နဲ့ Florida ပြည်နယ်ကြား ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ပါ တယ် ။
ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် ဒီရေလှိုင်းတွေ တက်လာပြီး နေအိမ်တွေ နစ်မြှစ်ကာ လူတွေကို ပိတ်မိစေခဲ့ပါတယ်။ တနာရီ ၃ မိုင်နှုန်းလောက် နဲ့ ဒီရေတွေတဖြေးဖြေးတက်လာပြီး အယ်ဘားမား ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်းတလျောက်က မိုင် ၃၀ ခန့်ကို ရေလွှမ်းခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် ဒေသတစ်ချို့ မှာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်တာ ၊ သစ်ပင်တွေလဲပြိုတာနဲ့ ရေကြီးရေလျှံတာတွေ စတင် ဖြစ်ပွားနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၁၀ နာရီအထိ Sally မုန်တိုင်းဟာ အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်း တနာရီကို ၁၀၅ မိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ တယ်လို့ လည်း Miami အခြေစိုက် အမျိုးသား ဟာရီကိန်းစင်တာ (NHC) ကပြောပါတယ်။
မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ချိန် တချို့ ဒေသတွေမှာ မိုးရေချိန် ၃၅ လက်မ လောက် အထိရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ လည်း (NHC)ကပြောပါတယ်။
Florida ပြည်နယ် Tallahassee အနောက်ပိုင်းကနေ Alabama ပြည်နယ် Mobile Bay အထိ ကုန်းတွင်းပိုင်း မှာ မကြုံစဖူး အကြီးအကျယ်ရေဘေး အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ (NHC)က ခန်းမှန်းထား ပါတယ်။
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေက ရေလွှမ်းနေအိမ်တွေဆီ က လူတွေကို ကယ်ထုတ် နေ ပါတယ်။ တံတားတွေ ကျိုးနေတာ လည်း တွေ့ရပါတယ်။ ငါးဖမ်းလှေ ဆိပ်ကမ်းတွေလည်း ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ အခု လောလောဆယ် မှာ Alabama, Florida နဲ့ Mississippi ပြည်နယ်တွေက အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း ၅ သိန်းကျော် လျှပ်စစ်မီး မရှိ တော့ဘူးလို့လည်း လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်တာတွေ အစီရင်ခံ တဲ့ Poweroutage.us. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က ပြော ပါ တယ် ။
နေ့လည်ပိုင်း မှာတော့ မုန်တိုင်းဟာ တနာရီ ၁၁၀ ကီလိုနှုန်းအထိ အရှိန်ကျသွား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးသဲနေဆဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြာသပတေးနေ့မှာ အယ်ဘားမား နဲ့ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ် ကုန်းတွင်းပိုင်းဆီ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လာမယ့် ရက်ပိုင်း အတွင်း ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေ ရေလွတ်ရာကိုရွေ့ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ Pensacola မြို့မှာ မိုးရေချိန် ၂ ပေအထိ စံချိန်တင်ခဲ့ပြီး မြို့တွင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာတော့ ရေက ၃ ပေကျော်အထိ လွှမ်းခဲ့တယ်လို့ အမျိုးသား မိုး-ဇလ ဌာနကပြောပါတယ်။
မိုးရေချိန် ဒီလောက်များတာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ Sally မုန်းတိုင်းဟာ တဖြေးဖြေးချင်းရွေ့နေပြီး လေရော ၊ မိုးပါသဲတဲ့ အတွက် စိုးရိမ်ထိန့်လန့်စရာ ပါပဲ- လို့ မိုး-ဇလ ကျွမ်းကျင်သူ David Eversole ကပြောပါတယ်။
Sally မုန်းတိုင်း ဟာ သီတင်း ၃ ပတ် အတွင်း ဒီပင်လယ်ကွေ့ဒေသဆီဝင်လာ တဲ့ ဒုတိယ မြောက် မုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ ဖရော်ရီဒါ၊ အယ်ဘားမား၊ မစ်စ်စပီ နဲ့ လူဝီစီယားနား ပြည်နယ် ၄ ခုက နေရာအချို့ကို အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကြေညာထား ပါတယ်။
Sally ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်း ဟာ လွန်ခဲ့သော ၁၆ နှစ် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ၌ တိုက်ခတ်ခဲ့သော Alabama ပြည်နယ် ၏ နောက်ဆုံးမုန်တိုင်း အိုင်ဗန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုနှင့် နေ့ရက် အချိန် အတူတူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
တနာရီကို ၁၆၅ – ကီလိုမီတာနှုနျးလတေိုကျပွီး မိုးပါသယျလာ တဲ့ ဟာရီကိနျးမုနျတိုငျး Sally ကွောငျ့ မက်ကဆီကို ပငျလယျကှကေ့ အမရေိကနျကမျးရိုး တနျး ဒသေတှမှော ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ မိုးသညျးသညျး ထနျထနျ ရှာသှနျးခဲ့ပွီး အယျဘားမား (Alabama) နဲ့ ဖရျောရီဒါ (Florida) ပွညျနယျ ဒသေတခြို့ မှာ မကွုံစဖူး စံခြိနျတငျ ရကွေီးမှုတှေ ဖွဈပျေါမယျ့ အန်တရာယျကို ရငျဆိုငျနေ ရ ပါတယျ။
တဖွညျးဖွညျးခငျြးရှနေ့ေ တဲ့ ဟာရီကိနျး မုနျတိုငျး အဆငျ့ ၂ ရှိတဲ့ Sally မုနျတိုငျး ဗုဒ်ဓဟူးနညေ့ပိုငျး မှာ Alabama ကမျးရိုးတနျး နဲ့ Florida ပွညျနယျကွား ကုနျးတှငျးပိုငျးကို ဝငျရောကျတိုကျခတျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထား ပါ တယျ ။
ဒီမုနျတိုငျးကွောငျ့ ဒီရလှေိုငျးတှေ တကျလာပွီး နအေိမျတှေ နဈမွှဈကာ လူတှကေို ပိတျမိစခေဲ့ပါတယျ။ တနာရီ ၃ မိုငျနှုနျးလောကျ နဲ့ ဒီရတှေတေဖွေးဖွေးတကျလာပွီး အယျဘားမား ပွညျနယျ ကမျးရိုးတနျးတလြောကျက မိုငျ ၃၀ ခနျ့ကို ရလှေမျးခဲ့ပါတယျ။
မုနျတိုငျးကွောငျ့ ဒသေတဈခြို့ မှာ လြှပျစဈမီးပွတျတောကျတာ ၊ သဈပငျတှလေဲပွိုတာနဲ့ ရကွေီးရလြှေံတာတှေ စတငျ ဖွဈပှားနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ဒသေစံတျောခြိနျ မနကျ ၁၀ နာရီအထိ Sally မုနျတိုငျးဟာ အမွငျ့ဆုံး လတေိုကျနှုနျး တနာရီကို ၁၀၅ မိုငျနှုနျး ရှိခဲ့ တယျလို့ လညျး Miami အခွစေိုကျ အမြိုးသား ဟာရီကိနျးစငျတာ (NHC) ကပွောပါတယျ။
မုနျတိုငျးဝငျရောကျခြိနျ တခြို့ ဒသေတှမှော မိုးရခြေိနျ ၃၅ လကျမ လောကျ အထိရှာသှနျးနိုငျတယျလို့ လညျး (NHC)ကပွောပါတယျ။
Florida ပွညျနယျ Tallahassee အနောကျပိုငျးကနေ Alabama ပွညျနယျ Mobile Bay အထိ ကုနျးတှငျးပိုငျး မှာ မကွုံစဖူး အကွီးအကယျြရဘေေး အန်တရာယျနဲ့ ကွုံတှနေို့ငျတယျလို့ (NHC)က ခနျးမှနျးထား ပါတယျ။
အရေးပျေါကယျဆယျရေး လုပျသားတှကေ ရလှေမျးနအေိမျတှဆေီ က လူတှကေို ကယျထုတျ နေ ပါတယျ။ တံတားတှေ ကြိုးနတော လညျး တှရေ့ပါတယျ။ ငါးဖမျးလှေ ဆိပျကမျးတှလေညျး ပကျြစီးကုနျပါတယျ။ အခု လောလောဆယျ မှာ Alabama, Florida နဲ့ Mississippi ပွညျနယျတှကေ အိမျခွေ စုစုပေါငျး ၅ သိနျးကြျော လြှပျစဈမီး မရှိ တော့ဘူးလို့လညျး လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျတာတှေ အစီရငျခံ တဲ့ Poweroutage.us. ဝကျဘျဆိုဒျက ပွော ပါ တယျ ။
နလေ့ညျပိုငျး မှာတော့ မုနျတိုငျးဟာ တနာရီ ၁၁၀ ကီလိုနှုနျးအထိ အရှိနျကသြှား ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိုးသဲနဆေဲဖွဈတဲ့ အတှကျ ကွာသပတေးနမှေ့ာ အယျဘားမား နဲ့ ဂြျောဂြီယာ ပွညျနယျ ကုနျးတှငျးပိုငျးဆီ ဝငျရောကျလာနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လာမယျ့ ရကျပိုငျး အတှငျး ထောငျနဲ့ခြီတဲ့လူတှေ ရလှေတျရာကိုရှပွေ့ောငျးဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျလို့ ဒသေဆိုငျရာ အာဏာပိုငျတှကေပွောပါတယျ။ Pensacola မွို့မှာ မိုးရခြေိနျ ၂ ပအေထိ စံခြိနျတငျခဲ့ပွီး မွို့တှငျးလမျးမတှပေျေါမှာတော့ ရကေ ၃ ပကြေျောအထိ လှမျးခဲ့တယျလို့ အမြိုးသား မိုး-ဇလ ဌာနကပွောပါတယျ။
မိုးရခြေိနျ ဒီလောကျမြားတာ ပုံမှနျမဟုတျဘူး။ Sally မုနျးတိုငျးဟာ တဖွေးဖွေးခငျြးရှနေ့ပွေီး လရေော ၊ မိုးပါသဲတဲ့ အတှကျ စိုးရိမျထိနျ့လနျ့စရာ ပါပဲ- လို့ မိုး-ဇလ ကြှမျးကငျြသူ David Eversole ကပွောပါတယျ။
Sally မုနျးတိုငျး ဟာ သီတငျး ၃ ပတျ အတှငျး ဒီပငျလယျကှဒေ့သေဆီဝငျလာ တဲ့ ဒုတိယ မွောကျ မုနျတိုငျးဖွဈပါတယျ။
သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ကတော့ ဖရျောရီဒါ၊ အယျဘားမား၊ မဈဈစပီ နဲ့ လူဝီစီယားနား ပွညျနယျ ၄ ခုက နရောအခြို့ကို အရေးပျေါအခွအေနအေဖွဈ ကွညောထား ပါတယျ။
Sally ဟာရီကိနျး မုနျတိုငျး ဟာ လှနျခဲ့သော ၁၆ နှဈ ၂၀၀၄ ခုနှဈ ၌ တိုကျခတျခဲ့သော Alabama ပွညျနယျ ၏ နောကျဆုံးမုနျတိုငျး အိုငျဗနျဟာရီကိနျးမုနျတိုငျး တိုကျခတျမှုနှငျ့ နရေ့ကျ အခြိနျ အတူတူ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
Previous post အပူပိုင်းမုန်တိုင်း“ နိုလ် ”(NOUL) ကြောင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ မိုးကြီးမည်
Next post မြန်မာတပ်ဖွဲ့များ ၏ လုပ်ရပ်များ မှ ထွက်ပေါ်လာနိုင် သည့် အခြေအနေတိုင်း ကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရပြော